ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံ China Manufacturer
Hunan Eter Electronic Medical Project Stock Co., Ltd. [Hunan,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Middle East ထုတ်ကုန်:11% - 20% Cert:ISO13485, ISO9001, OHSAS18001, ASME, CE ဖေါ်ပြချက်:အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံ,အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံစျေး,အောက်စီဂျင်ဖြစက်ရုံ
Home > ထုတ်ကုန်များ > အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြစနစ် > Compact အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစနစ် > ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံ
အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ ခြင်းတောင်းမှ Add
ထွက်နိုင်ရေး: 50 Sets/Month
HS Code ကို: 841960019000
အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံ
တစ်ခုမှာနှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထားအောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံဖျေါပွခကျြမှာတော့ 1.All
PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထား PSA အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါအဆာဘူတာရုံ Atlas Copco လေကြောင်း Compressor, SMC ရေခဲသေတ္တာလေကြောင်းလေမှုတ်စက်နှင့် filter, လေကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့နှင့်အောက်စီဂျင်ကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့, ETR PSA အောက်စီဂျင်စက်ရုံ, အောက်စီဂျင်အာနိသင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အောက်စီဂျင်ဖြည့်ဘူတာရုံပါဝင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။
compressed လေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အဓိကစက်ရုံတစ်အချို့သောအဆင့်အထိလေမှုတ်စက်နှင့် filter မှတဆင့်သန့်စင်သည်။ Air ကိုကြားခံအရှင်ပူးတွဲ mpressed လေကြောင်းအရင်းအမြစ်များ၏ပွောငျးခွငျးလျှော့ချရန် compressed လေထု၏ချောမွေ့ထောက်ပံ့ရေးများအတွက်ထည့်သွင်းထားသည်။ အဆိုပါစက်ရုံတစ်ဦးအချိန်သက်သေပြအောက်စီဂျင်မျိုးဆက်နည်းလမ်းဖြစ်သော PSA (ဖိအားလွှဲထိစိမ့်) နည်းပညာနှင့်အတူအောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်သည်။ 93% မှာတပ်မက်လိုချင်သောအသန့်ရှင်းစင်ကြယ်၏အောက်ဆီဂျင်± 3% ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ငွေ့ချောမွေ့ထောက်ပံ့ရေးများအတွက်အောက်စီဂျင်ကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့ထဲမှာအောက်စီဂျင် 4bar ဖိအားမှာထိန်းသိမ်းထားသည်။ အောက်ဆီဂျင်အာနိသင်တိုးမြှင့်မှုနှင့်အတူအောက်ဆီဂျင်ဖိအား 150bar မှရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါအဆာဘူတာနှင့်အတူဆလင်ဒါထဲမှာဖြည့်ပါ။
အားလုံးတစ်ဦးကနှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထားအောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံခုနှစ်တွင် 2. အားသာချက်
•အချိန်သက်သေပြ PSA နည်းပညာစနစ်၏တည်ငြိမ်ပြီးစီးပွားရေးသေချာ
•လွယ်ကူ installation နဲ့စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။
အားလုံးစက်ရုံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြည့်တစ်ဦးကနှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထားအောက်ဆီဂျင် Cylinder ထဲမှာ 3.
ETR အင်ဂျင်နီယာ & နည်းပညာ, client များ ETR ဖြေရှင်းချက်များ၏အရည်အသွေးသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ETR သာအကောင်းဆုံးပေးသွင်းခြင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ထိုလူအပေါင်းတို့အောက်စီဂျင်မီးစက်သူတို့စက်ရုံစွန့်ခွာမတိုင်မီအရာအားလုံးအရည်အချင်းပြည့်ဖြစ်ပါသည်သေချာစေရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်သူများကအားဖြင့်စမ်းသပ်ပြီး & ပြန်တမ်းနေကြသည်။
အားလုံးဘူတာမော်ဒယ်ကို Select လုပ်ပါဖြည့်တစ်ဦးကနှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထားအောက်ဆီဂျင် Cylinder ထဲမှာ 4.
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြစနစ် > Compact အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစနစ်
အောက်စီဂျင်မဖြစ်စေ Bottle သဖြစက်
နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်တပ်ဆင်ထားအောက်ဆီဂျင်စေ Cylinder Refill စက်
ဆေးရုံထူးထူးအပြားပြားဘူတာများအတွက်အောက်စီဂျင် Bottle သ Refill စက်ရုံ
ကောင်းမွန်သောစျေးနှင့်အတူပစ္စည်း Refilling အောက်စီဂျင် Bottle သ
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူပစ္စည်း Refilling အောက်စီဂျင် Bottle သ
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူ Facility Refilling အောက်စီဂျင် Cylinder
အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံစျေး
PSA အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံ
အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြ Facility စက်ရုံ
အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြစက်
အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံစနစ်
အောက်စီဂျင် Cylinder Refill စက်ရုံ
အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံ အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံစျေး အောက်စီဂျင်ဖြစက်ရုံ PSA အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံ အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြ Facility စက်ရုံ အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြစက် အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံစနစ် အောက်စီဂျင် Cylinder Refill စက်ရုံ